I nomuthi "Bronhomunal" Umsebenzisi Isicelo iphathelene emitholampilo kwemithi iqembu immunostimulatory unamasu imvelaphi virus. I nomuthi kukhishelwa ngesimo opaque kanzima gelatin amaphilisi (emithathu nengxenye ukuze angu eziyisikhombisa). okuqukethwe kwabo powder beige-anemibala.
isithako emelelwa lysate lyophilized kwamagciwane, futhi phakathi izingxenye ukwesekwa - anhydrous propyl gallate, sodium glutamate, magnesium stearate, mannitol, isitashi prozhelatinirovanny, ama-titanium dioxide, gelatin, indigotine.
Imithi okuthengiswa ibhamuza amaphakethe afakwe amakhadibhodi amabhokisi.
Ukulungiswa ezithaka imithi "Bronhomunal" inikeza ukukhuthazwa amasosha omzimba humoral kanye neselula. Iphinde kunciphisa tigameko kanye degree of kobukhulu ukutheleleka, ngokunciphisa isidingo sokusebenzisa antibiotic.
Nomuthi "Bronhomunal" imfundo manual liyala ukusebenzisa kulezi zimo ezilandelayo:
· Ukuze ekwelapheni zokuphefumula ipheshana izifo bemvelo ezithathelwanayo (kuhlanganise nezingane ezingaphansi kweminyaka engu-izinyanga eziyisithupha).
· Ukuze kuvikelwe Ukuphinda izifo zendawo yasenhla nemithombo yasenzansi ipheshana zokuphefumula, njengesifuba namathansela, ukucinana kwemigudu yokuphefumula, laryngitis, pharyngitis, sinusitis, otitis, rhinitis.
"Bronhomunal" izidakamizwa. Yokusetshenziswa umthamo
Ezinganeni ezineminyaka engaphezu kwengu-nambili kanye nabantu abadala libonisa angu eziyisikhombisa zomuthi ngelanga, iziguli ngemva kwezinyanga eziyisithupha kuya eminyakeni eyishumi nambili uqokwa angu emithathu nengxenye nsuku zonke.
Umuthi esithathwayo kanye ngelanga esiswini esingenalutho (mhlawumbe ekuseni). Uma ungeke ukwazi ukugwinya wonke capsule, ke lingavuleka buhlanjululwe powder okwelapha juice, ubisi noma itiye.
Njengoba isilinganiso izifo (ukuvimbela izifo ezithathelwanayo) kutuswa ukuba ezintathu ngosuku eziyishumi-Yebo yokwelapha ngezikhathi nezinsuku ezingamashumi amabili.
Esigabeni acute lesi sifo kuboniswa ukuthatha omunye capsule ngosuku kuze ukunyamalala ephelele izimpawu, kodwa akukho esingaphansi kwezinsuku eziyishumi.
Izidakamizwa "Bronhomunal" - imithi, neze kubangele izimpawu ohlangothini. Ezimweni ezingavamile fixed iziyaluyalu wokugaya ukudla (ubuhlungu epigastric, uhudo, ukucanuzela kwenhliziyo noma ukuhlanza), futhi ukwandisa izinga lokushisa emzimbeni wesiguli.
Ngezinye ongaphakeme kobukhulu nemiphumela engemihle ukukhansela izidakamizwa liyadingeka.
Umuthi kuncike contraindicated nge ngabanye izingxenye ukungabekezelelani.
Lapho udinga imithi angasetshenziswa ngesikhathi ibele futhi ngenkathi elinde ingane, kodwa lokhu kufanele kwenziwe ngokucophelela okukhulu futhi kuphela ngaphansi kokuqondisa udokotela ukuba khona.
Phakathi ukuthatha ngomlomo "Bronhomunal" ngemigomo kanye imithi Kunconywa ukwenza ikhefu amasonto amane.
Umuthi akufanele lisetshenziswe khona izifo sibi emathunjini, ngoba is hhayi ngaphandle ekunciphiseni ekulenzeni libe namandla.
Nomuthi "Bronhomunal" (incwadi yeziyalezo yazisa) is hhayi zaphathwa izingane ezingaphansi kweminyaka engu-izinyanga eziyisithupha.
Ikhono ukuphatha izinhlobo ezahlukene ke akuphazamisi izimoto kanye nemishini.
ukubonakaliswa Clinical ngokweqile of imithi okwamanje azifani. Kukhona futhi akukho ulwazi ubuthi ngenxa adlula ubukhulu lemali ovumelekile zomuthi.
Hhayi kungavunyelwe ukusetshenziswa kwalesi izidakamizwa ngokuhlangene nanoma yikuphi neminye imithi, kuhlanganise ama-antibiotic.
Pharmacy, izidakamizwa sithengiswa kuphela kadokotela.
Isitoreji lokushisa elikhulu we nomuthi ivela nanhlanu kuya amabili nanhlanu degrees Celsius.
Lapho lesi sitshalo St John sika wort isetshenziswa? St John sika wort uwoyela: isicelo futhi izakhiwo ewusizo
Bokufika - umuntu ayahamba komunye noma kwenye insimu
Ilya Yezhov - Unozinti lochwepheshe
Unkosikazi Dmitry Medvedev ekuyi sika: Biography nesithombe
Amathebulethi wokubambezeleka kokuya esikhathini: incazelo kanye nemiyalelo